SP-L29 Soicare fanaraha-maso lavitra 300ml menaka manitra ilaina Bluetooth mozika mpandahateny mpanelanelana aromatherapy diffuser, China SP-L29 Soicare fanaraha-maso lavitra 300ml an-trano manan-danja menaka Bluetooth Bluetooth mpiteny mozika aromatherapy diffuser mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Sunpai Industries Limited
SP-L29 Soicare fanaraha-maso lavitra 300ml menaka manitra ilaina Bluetooth mozika mpandahateny mozika diffuser aromatherapy
Fanaraha-maso lavitra soicare 300ml menaka manitra ilaina ao an-trano Bluetooth mpandefa mozika aromatherapy diffuser
· ♫[Bluetooth Music Player]Iray amin'ireo tsy maintsy hananana mandritra ny lanonam-pianakaviana. Ny Music diffuser namboarina anaty Bluetooth Speaker. Ny haben'ny zavon-tsifotra dia hanaraka ny gadon-kira. Arakaraka ny maha haingana ny gadona mozika dia hiova ny hafaingan'ny zavona. Afaka mandihy miaraka amin'ny mozika miaraka amin'ny jiro miova ianao, mamorona rivo-piainana milamina sy tantaram-pitiavana ary miloko.
· ♫[Remote Control & Timer]Ny diffuser 300ML dia manana maody fanodinam-panafody 4: mode 60Min / 120Min / Intermittent / Continuous. Azonao atao ny manamboatra akanjo ho an'ny maody mist alohan'ny hatory amin'ny alàlan'ny bokotra diffuser na fanaraha-maso lavitra. Ary amin'ny maha jiro natory anao dia azonao atao ny mampiasa ny «remote remote» handrehitra / hamonoana ny jiro amin'ny alina rehefa mifoha amin'ny misasakalina ianao, izay manamora ny fiainanao sy mahazo aina.
· ♫[Jiro miova 8]Ny diffuser menaka tena ilaina miaraka amin'ny jiro LED miova 8 izay mampitony anao dia mamporisika anao ho tony sy ho tony amin'ny alina. Ny tantaram-pitiavana hazavana sy hazavana mareva-doko malefaka sy ny famirapiratana mifangaro dia mamorona fotoana mafana sy tantaram-pitiavana ho an'ny daty na fety. Ary ny diffusite jiro amin'ny alina dia azo ampiasaina ho jiro eo am-pandriana sy jiro latabatra koa ho an'ny efitrano fandriana, fianarana na toeram-piasana.
· ♫[Air Humidifier Ultrasonic]Ny fanamainana rivotra dia mandray ny haitao ultrason mist, mitazona ireo akora mahomby avy amin'ny menaka esansiela, mamela ny huile essentielle sy ny molekiola rano levona anaty rano avoaka tanteraka amin'ny rivotra ary mora entin'ny vatana, mamelombelona ny hoditra ary mampitombo ny hamandoan'ny rivotra . Ary ny mandomando dia mangina tanteraka, afaka mankafy torimaso tsy mitabataba ianao.
· ♫[Fiainana salama sy fiarovana]Rehefa avy nanisy menaka esansiela dia manamboatra fofona mahafinaritra mampitony ao amin'ny efitrano iray ny diffuser ny fofona, izay manarona ny fofon'ny biby fiompy na mifoka sigara na maloto hafa, manamaivana ny havizanana ary ny adin-tsaina. Manakatona ny fiara tsy mandeha amin'ny rano ao anaty fiara diffuser ary mampiasa fitaovana PP mahatohitra harafesina, tsy misy poizina, ary insulation elektrika tsara, izay manome toky ny fiarovana anao sy ny fianakavianao.